कोरोनाबारे तीन अफवाह, तपाई पनि झुक्किनुभयो कि ? - ePosttimes
Homeसमाजकोरोनाबारे तीन अफवाह, तपाई पनि झुक्किनुभयो कि ?
८ चैत्र २०७६, शनिबार १२:५८ समाज, हाम्रो सरोकार 0
काठमाडौं । कोरोना भाइरसलाई जोडेर सामाजिक सञ्जालमा झूठा प्रचारहरु हुन थालेका छन् । यसक्रममा झूठो प्रचार गर्ने एक जनालाई शनिबार प्रहरीले समातेको छ ।
तर, समाजिक सञ्जालहरुमा भने कोरोना संक्रमणबारे थुप्रै अफवाहहरु फैलिएका छन् । र, यो सामाजिक सज्जालका ग्रुप तथा म्यासेजहरूमा भाइरल बनेको छ ।
मध्यरातमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले औषधि छर्किँदैछ भन्ने प्रचार पनि अफवाह नै हो । नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी विज्ञानराज पाण्डेले यसको खण्डन गरेका छन् । सेनाले यसबारे विज्ञप्ति नै निकालेर भ्रमको खण्डन गरेको छ ।
साथै कोरोना भाइरसको अहिलेसम्म कुनै औषधि पत्ता लागेको पनि छैन । यस्तै टेकु अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएको दाबी पनि अफवाह भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
258600cookie-checkकोरोनाबारे तीन अफवाह, तपाई पनि झुक्किनुभयो कि ?yes
कञ्चनपुरबाट ६ घण्टामा १३ हजार मान्छे नेपाल भित्रिए धरानमा कोरोना पुर्वतयारी: ४ वटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय विदेशबाट आएका नागरिक खोज्दै, विवरण संगकलन गर्दै धरान नगरपालिका जङ्गली जनवार सालकबाट कोरोना भाइरस सरेको आशंका अब लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई दुई घन्टा सडकमा उभ्याइने यायोक्खा इटहरीद्वारा एक लाख राहत रकम प्रदान नेपालगञ्जमा एकैदिन भेटिए १५ कोरोना संक्रमित इटहरी उपमहानगरपालिकाकाे वाड नं २ र ३ शिल, घर बाहिर निस्कन समेत नपाइने